कैलालीमा कोरोना सङ्क्रमित एक जनाको मृत्यु « रिपोर्टर्स नेपाल
(Saturday 2nd July 2022)
कैलालीमा कोरोना सङ्क्रमित एक जनाको मृत्यु
प्रकाशित मिति : 2021 April 12, 1:59 pm
कैलाली, ३० चैत्र । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–३ का ५० वर्षीय पुरुषको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण आज मृत्यु भएको छ । कडा खालको निमोनियाले अवस्था जटिल भएपछि आइतबार राति अस्पताल पुग्नु भएका उहाँको नमूना परीक्षण गर्दा कारोना सङ्क्रमणको पुष्टि भएको थियो ।
सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीका सूचना अधिकारी दिलीपकुमार श्रेष्ठले आइतबार राति भर्ना भएका उहाँको अस्पतालको भेन्टिलेटरमा उपचारका क्रममा आज बिहान मृत्यु भएको जानकारी दिए । गएको फागुनमा उनी भारतबाट घर फर्किएको जनाइएको छ । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सङ्क्रमित चार जनाको उपचारको व्यवस्थापन भइरहेको छ । ‘‘सङ्क्रमितमध्ये दुई जनाको भेन्टिलेटरमा र एक जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ,’’ सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने, ‘‘फागुन १० गतेयता कोरोनाका कारण हुने मृत्यु दर अस्पतालमा शून्य रहेकामा आज ५० दिनपछि एक जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको हो ।’’
पछिल्ला हप्तामा भारतमा यो रोगको सङ्क्रमण र मृत्यु दर बढेसँगै नेपालमा यो रोग फैलिने जोखिम देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग सीमा जोडिएको भारतको उत्तर प्रदेशमा कोरोनाको सङ्क्रमण बढेसँगै त्यहाँका शैक्षिक संस्था बन्द गरिएको छ ।
महेन्द्रनगरस्थित महाकाली अस्पतालमा उपचाररत एक जना सङ्क्रमितको पनि केही दिनअघि मृत्यु भएको थियो । रोग फैलिन नदिन सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको भए पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालनामा भइरहेको लापरवाहीले कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्ने देखिएको श्रेष्ठले बताए। मास्क नलगाई हिँड्ने, एक आपसमा भौतिक दूरी कायम नगर्ने जस्ता स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड नअपनाउँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोनाको उच्च जोखिम देखिएको छ । पछिल्ला दिनमा प्रदेशमा यो रोगको सङ्क्रमण दर बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालय दीपायलको तथ्याङ्कका अनुसार पछिल्लो तीन हप्तामा १२७ जनामा सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ । रासस
बाँकेमा पुनः तीनमा कोरोना सङ्क्रमण
काठमाडौँ,१७ असार । बाँकेमा तीन जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । भेरी अस्पताल, नेपालगञ्जमा
उपत्यकामा थप तीन जनामा हैजा
काठमाडौँ,१७ असार । काठमाडौँ उपत्यकामा आज थप तीन जनामा हैजा देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा
थप ५५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
काठमाडौं, १६ असार : पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप ५५ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको
जुम्लाको पातारासीमा पूर्णखोप
काठमाडौँ,१६ असार । जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित तथा दिगोपना पालिका घोषणा गरिएको छ
सिकलसेल एनेमियाका बिरामीको निःशुल्क उपचार माग
काठमाडौँ,१६ असार । थारू समुदायको बाहुल्यता रहेका विभिन्न जिल्लाका सिकलसेल एनेमियाका बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्न
कसरी लाग्छ हैजा, यी हुन् लक्षण र रोकथामका उपाय
काठमाडौं, १६ असार । हरेक वर्षायाममा नेपालका विभिन्न भागमा हैजाका बिरामीहरू भेटिने गरेका छन् ।
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थपिए ६२ जना कोरोना संक्रमित
काठमाडौं, १५ असार नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ६२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम निरन्तरता दिने
काठमाडौं, १५ असार । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ
महिला खुल्ला गल्फ (फोटोफिचर)
काठमाडौं, १८ असार । महिला खुल्ला गल्फ प्रतियोगिता सकिएको छ । गल्फ प्रतियोगिताको पुरस्कार वितरणमा
जब पृथ्वीनारायणको शालिक तोडियो… (भिडियोसहित)
हे बीसे नगर्ची ! हे भगवन्तनाथ ! तिम्रा पृथ्वीनारायण शाहको शालिक फोडेर तिम्रा पृथ्वीनारायणको नेतृत्वमा
निजगढमा नेताहरुको निजी स्वार्थले देश कंगाल हुने बाटोमा
काठमाडौं, १८ असार । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ सार्वजनिक हुँदा पर्यावरणमा न्यूनतम
विमलालाई चोख्याउने चाल, ६ लाख २० हजार लेनदेनको विवाद देखाइयो
काठमाडौं, १८ असार । लुम्बिनी प्रदेशकी महिला राज्यमन्त्री विमला वली खत्रीलाई चोख्याउने गरी छानविन समितिले